Orinasa paompy Peristaltika - Mpanamboatra paompy Peristaltika Shina, mpamatsy
Fampidirana amin'ny antsipiriany Faritra fivezivezena: 0.0002-900ml / min famaritana ny vokatra Ny famolavolana vy, ny bokotra sy ny fampisehoana dia natao miaraka amin'ny ergonomika mandroso ary amin'ny zoro 30 ° mankany amin'ny marindrano. Manohitra ny asidra sy alkali, mahazaka harafesina. Amin'ny anglisy sy sinoa, ny hafainganana dia nitombo ho 200 rpm ary voafehy ny efijery mikasika. Izy io dia afaka mahatsapa ny fizarana tsotra, ny fatra isa, ny fonosana mitohy, ny fizahana ary ny fiasa hafa. Ahitana opera efijery mikasika ...
Masinina famenoana mandeha ho azy Product Features GZ100-3A dia rafitra famenoana paompy peristaltika & mpanara-maso miaraka amina fifehezana manan-tsaina izay novolavolain'ny orinasanay tsy miankina. Ny rafitry ny famenoana dia misy andiana singa fototra enti-mitondra fiara 4, izay azo hitarina hatramin'ny fantsona 32; Ny sera YZ sy ny lohan'ny paompy DMD15 dia azo apetraka hanomezana safidy isan-karazany ny mpanjifa. Mampiasa efijery indostrialy 7-inch ny mpanara-maso mba hampisehoana mazava ny atiny fandidiana ho an'ny mpanjifa. Feat ...
Parameter teknika Fanapahana volavolan-dalàna famenoana: 1ml — 100ml Halavan'ny famenoana: 0.5-30s Haingam-pandeha: 1-600rpm Halavan'ny hafainganam-pandeha: kajy ho azy araka ny habetsahana sy ny fotoana famenoana. Sud-tsofina miverina: 0—360 ° Calibration: apetraho ao anaty paompy ny tena volavola, afaka manao kalibration ho azy izy. Amboary ny habetsahan'ny vahaolana amin'ny Internet: ny mpampiasa dia afaka manitsy ny habetsahan'ny vahaolana sy ny isan-jato amin'ny Internet Fanombohana fanombohana / fijanonana: fidirana amin'ny fifandraisana (fijanonana — famenoana rehefa tsy misy tavoahangy) Fahatsiarovana: Re ...
Parameter teknika Isan-karazany famenoana: 0.1ml — 30ml Faharetan'ny famenoana: 0,5—30s Halavan'ny hafainganam-pandeha: Kajy ho azy araka ny habetsahana sy ny fotoana famenoana. Sud-tsofina miverina: 0—1000 ° Haavo hafainganam-pandeha fanasana fantsona: Sasao mialoha sy famenoana mialoha, 15—350 rpm (13 #, 14 #, 19 #, 16 #) Calibration: arotsaho ao anaty paompy ny tena volony, afaka izy io manaova calibration ho azy. Amboary ny habetsaky ny vahaolana amin'ny Internet: ny mpampiasa dia afaka manitsy ny habetsahan'ny vahaolana sy ny isan-jato amin'ny isan'ny ...
Max tahan'ny fikorianana: famaritana vokatra 380ml / min Ny torsiam-bokatra familiana dia lehibe, ary afaka mitondra lohan-tsolika maro fantsona maro samihafa toy ny andian-dahatsoratra YZ sy andiany DG, izay afaka manome fantsom-pandrefesana 0,02-380ml. Ny fampahalalana fampisehoana kristaly ranoka goavam-be 128 × 64 teboka marobe dia afaka mampiseho ny tahan'ny fikorianan'ny paompy sy ny hafainganam-pandehany miaraka amin'ny asan'ny calibration mikoriana. manana fiandohana / fijanonana, mandroso / mamadika, hafainganam-pandeha tanteraka izy ary asa fanaraha-maso hafa. Ny fandidiana dia vita amin'ny bokotra membrane ...
Famaritana momba ny vokatra môtô tsy misy ifandraisany amin'ny fiara mitrandraka arintany ambanin'ny tany (tsy fitrandrahana harena ankibon'ny tany) misy vovoka metana na arina arintany, na fifangaroana mipoaka misy gazy na etona sy rivotra azo may ao amin'ny Class II B-kilasy T1-T4. fitaovana. Ny boaty fihaonana dia eo an-tampon'ny motera ary azo alefa amin'ny lalana 4. Izy io dia mety amin'ny tariby fingotra sy tariby vy. Ny boaty fihaonambe dia afaka manohana ny sakana terminal 3-6 tsirairay avy, ary ...